IPadka lumay, la xaday ama waxyeello soo gaadhay | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Haddii iPad-ka lumo, waa in sida ugu dhaqsaha badan loogu wargaliyaa shaqaalaha Xarunta Warbaahinta. Waxay noqon kartaa mas'uuliyadda ardayga iyo qoyska inay soo kabsadaan ama beddelaan iPad-kii lumay. Haddii loo baahdo, Degmada iyo booliska ayaa ka caawin doona soo kabashada.
Ha isku dayin inaad marin u hesho qalabka elektiroonigga ah ama dayactir iPad-gaaga. Haddii Ipadkaaga uu shaqeyn waayo ama waxyeelo gaarto, u sheeg dhibaatada sida ugu dhaqsaha badan Xarunta Warbaahinta ee dugsiga. Ikhtiyaarka dayactirka / beddelka iPad-ka waxaa go'aamin doona shaqaalaha Xarunta Warbaahinta ee dugsiga. Waxaa lagu siin karaa ipad ku meel gaar ah ama qalab kale ilaa ipadkaaga uu si fiican u shaqeynayo ama la badalayo. Haddii iPad-ka ay la soo gudboonaato dhibaatooyin xagga farsamada ka baxsan saacadaha dugsiga, waxaad u baahan doontaa inaad sugto illaa aad ku noqonayso dugsiga si aad u hagaajiso.
Ku cusub sanadkan: Waalidiinta waxay haystaan ikhtiyaar dheeraad ah oo ah inay marka hore buuxiyaan foomkan ka dibna u keenaan iPad-ka wadaagga rasmiga ah ee dayactirka Degmada, SmartFix, oo ku yaal 801 Twelve Oaks Center Drive, Suite 816B ee Wayzata. Marar badan, iPad-yada u baahan dayactirka waa la adeegi karaa isla maalintaas haddii la keeno duhurkii.
Ardayda qaadanaya ipadka guriga:
Khidmadaha beddelka waxaa lagu qiimeyn karaa walxaha lumay ama waxyeelloobay iyadoo la raacayo Jadwalka Khidmadda Ardayda ee Degmada ee alaabooyinka lumay ama dhaawacmay
Waxyeello ama shaashad jaban oo aan caymis lahayn, $ 115 illaa $ 275 waxay kuxirantahay tusaalaha
Degmadu waxay bixisaa barnaamijka caymiska iskaa wax u qabso ee iPad-ka ah si qoysaska looga ilaaliyo kharashyada dayactirka qaaliga ah. Qiimaha caymiska iPad-ku waa $ 40 sanadkii wuxuuna daboolaa burburka laakiin ma ahan khasaaro ama xatooyo. Barnaamijka caymiska wuxuu bixiyaa caymis dhameystiran marka ugu horeysa ee shil shil ah. Mararka kale ee shilalka waxyeellada ah waxay la kulmi doonaan $ 40 oo laga jari karo.
Ardayda ka tagta Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka inta lagu jiro sanad dugsiyeedka waa inay soo celiyaan ipadka, iyo wixii kale ee qalab ah, markay baxayaan. Ipadka iyo dhamaan qalabyada waa in lagu soo celiyaa shaqaalaha Xarunta Warbaahinta.